नेपाली लाई खुशिको खबर नेपाल र इजरायलबीच श्रम सम्झौता, यस्ता व्यक्तिले मात्र पाउँछन् रोजगारी – AB Sansar
नेपाली लाई खुशिको खबर नेपाल र इजरायलबीच श्रम सम्झौता, यस्ता व्यक्तिले मात्र पाउँछन् रोजगारी
September 26, 2020 September 27, 2020 adminLeaveaComment on नेपाली लाई खुशिको खबर नेपाल र इजरायलबीच श्रम सम्झौता, यस्ता व्यक्तिले मात्र पाउँछन् रोजगारी
काठमाडौं । नेपाल र इजरायलबीच यही असोज १४ गते श्रम सम्झौता हुने भएको छ। जेरुसेलमस्थित इजरायली विदेश मन्त्रालयमा स’म्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। इजरायलको नर्सिङ क्षेत्र (अस्पताल, नर्सिङ होम, दिवा सेवा केन्द्र) मा नेपाली के’यर गि’भर लैजाने सम्बन्धमा सम्झौता हुन लागेको हो। सम्झौतापत्रमा नेपालको तर्फबाट इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डा. अञ्जान शाक्य र इजरायलका विदेशमन्त्री गा’बी अ’स्खेनाजीले हस्ताक्षर गर्ने तेल-अ’भिभस्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव अर्जुन घिमिरेले जानकारी दिए।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इराजयलसँग श्रम सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डा. शाक्यलाई अ’ख्तियारी दिने निर्णयसमेत गरेको थियो। दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएपछि सरकारी त’वरबाट नेपाली श्रमिक कामका लागि इजरायल जानेछन्। सम्झौतापछि नेपाली श्रमिकले इजरायली ना’गरिकसरहको सेवा-सुविधा र संरक्षण पाउनेछन्। विभिन्न चरणमा भएको द्विपक्षीय छलफलकाक्रममा इजरायल विशेषगरी के’यर गि’भरमा नेपाली श्रमिक लैजान सकारात्मक देखिएको थियो।
इजरायलको नर्सिङ क्षेत्रमा नेपालबाट के’यर गि’भर ल्याउने विषय टुं’गोमा पुग्दै गर्दा त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले थप स’क्रियता देखाएको छ। इजरायलमा नेपाली के’यर गि’भर लैजाने पूर्वसन्ध्यामा इजरायल सरकारका प्रतिनिधि र दूतावासका उच्च अधिकारीले कार्यस्थल एवं कार्य वातावरणको जानकारी लिने उद्देश्यले केही क्षेत्रको स्थ’लगत अनुमगन गरेका छन्। केही दिनअघि राजदूत शाक्यले नेपाली के’यर गि’भरले काम गर्नुपर्ने नर्सिङ होमको स्थ’लगत भम्रण गरेका थिए। के’यर गि’भरमा छनोट हुनका लागि अ’नमी वा अन्य शैक्षिक उपाधि हा’सिल गरेका वा १२ कक्षा पास गरी तीनमहिने के’यर गि’भर तालिम लिएको हुनुपर्नेछ।
यस्तै, लिखित तथा अन्तर्वार्ता दुवैमा अंग्रेजी भाषा उत्तीर्ण, निश्चित उमेर, तौल र उचाइ, स्वास्थ्यावस्था ठीक तथा कुनै आ’पराधिक ग’तिविधिमा सं’लग्न नभएको व्यक्ति स्वच्छ प्र’तिस्पर्धाबाट छ’नोट गरिने दूतावासले जनाएको छ। त्यस्तै, यसअघि इजरायल गएका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नसक्ने पनि दूतावासले प्रष्ट पारेको छ। छनोट प्रक्रियामा श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका अ’लावा निजी क्षेत्र वा अन्य व्यक्तिको सं’लग्नता नहुने भएकाले कुनै ह’ल्लाको पछाडि नलाग्न दूतावासले आ’ग्रह गरेको छ।
श्रीमती महि’नावारी हुँदा श्रीमानले के गर्ने ? हरेक पुरुषले पढ्नै पर्ने…
कोरोनाले नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व राजदूत लामाको निधन
December 10, 2020 santosh